बिजुली चोर पनि मेयरका उम्मेदवार
जनकपुर । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बिजुली चोरी गरेको अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई प्रमुखका रूपमा अघि सारेको छ । लोकतान्त्रिक फोरमले दुई वर्षअघि बिजुली चोरको अभियोगमा पक्राउ परी ३ लाख ४१ हजार जरिवाना ...
यसपटकका धेरै मन्त्री देशलाई थला पार्ने खालका, यी पनि त्यही ड्याङका
काठमाडौं । गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनी शिक्षामा सुधार होइन, वर्षौंसम्म थला पार्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त रहे । मन्त्री भएलगत्तै उनले ...
एक कर्मचारीले जब सांसदहरुलाई भने, ‘जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला समितिमा जवाफ दिन आउने फर्सद छैन’
काठमाडौं । आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले संसदीय समितिका बैठकमा जति बेला चाह्यो उति बेला नबोलाउन सांसदहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । उद्योग, बाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बोलाएको ...
चीनका उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमण किन भएन ?
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत असोजमा नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी गरे, अन्तिम समयमा रद्द भयो । अघिल्ला राष्ट्रपति हु जिन्ताओ दुवै कार्यकालमा नेपाल आएनन् । चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान ...
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न संघीय संसदको चुनाव चितनवबाट लड्ने घोषणा गरेका छन् । प्रचण्डले चितवनको कुन क्षेत्रबाट लड्ने तय हुन बाँकी रहेको बताए । प्रेस सेन्टर ...
उम्मेदवारको दाबी–विरोधमाथि छानविन हुँदै, ५ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन पाउने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेकाहरुले नाम फिर्ता लिन चाहेमा शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले शुक्रबार नै दावी विरोध ...
सप्तरी। आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन कार्य सकिएलगत्तै स्थानीय प्रशासनको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन सुरक्षातर्फ केन्द्रित भएको छ । यसैक्रममा सुरक्षा समितिले गोप्य सूचना र ...
माओवादी केन्द्रका नेता ढुंगेल माथि खुकुरी प्रहार, गम्भिर घाइते
दोलखा । नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोलखाका नेता राम ढुङ्गेल खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका छन् । कालिञ्चोक गाउँपालिकाका सह–संयोजक ३३ वर्षीय नेता ढुङ्गेल खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका हुन् । खुकुरी प्रहारबाट ...
सांसदलाई चाहियो आजिवन सेवा सुविधा
काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मासिक लाखौँको सेवा–सुविधा दिने कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसमै पूर्वसांसदलाई समेत समावेश गरेर आजीवन सेवा–सुविधा दिने ...
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ९५ दलले चुनाव चिह्न पाए, कुन पार्टीको के चुनाव चिन्ह
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संसदको चुनाव प्रयोजनका लागि दलहरुलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ । यसरी चुनाव चिह्न पाउनेमा ९५ दल छन् । मंसिर १० र २१ मा दुई चरण गर्न ...
जनकपुर । प्रदेश नं.२ का ८ वटै जिल्लामा उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलमा आन्तरिक कलह चर्केको छ । त्यसले चुनावी प्रचारलाई समेत प्रभाव पारेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र ...
पुरुष चुनाव प्रचारमा महिला मेलापात
सर्लाही । प्रदेश २ मा हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरण निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तासँगै यहाँका घरघरमा चुनाव लागेको छ। उम्मेदवार र अगुवा कार्यकर्ता जित सुनिश्चित गर्न घरदैलोमा व्यस्त छन्। मतदाता आकर्षित गर्ने ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि नैतिकता र ...
२६ हजार ६ सय ५२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए, विवरण आँउन अझै बाँकी
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा आज बिहान ९ः३० बजेसम्म प्राप्त विवरणमा २६ हजार ६५२ उम्मेदवारी दर्ता भएको सूचना प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको ...
विप्लब माओवादीद्वारा पूर्व भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको जग्गा कब्जा गर्यो
चितवन । पुर्वी चितवनको रत्ननगरमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्व भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेको जग्गा कब्जा गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवन ईलाका नम्बर ३ ले रत्ननगर नगर समितिले पूर्व भूमिसुधारमन्त्री ...
नेताका नातेदारदेखि व्यापारीसम्म कांग्रेसका उम्मेदवार, फिर्ता लिएर तालमेल नहुने
काठमाडौं । कांग्रेसले प्रदेश नं. २ मा नेतादेखि व्यापारीका परिवारसम्मलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, नेतानिकटदेखि गुटगत रूपमा पनि टिकट दिइएको छ । राजनीतिमा सक्रिय नभएकालेसमेत टिकट पाएका ...
यी हुन् तीन भाग्यमानी जो माओवादीमा प्रवेश गरेकै दिन उम्मेदवार बने
काठमाडौं । माओवादीले अरु दलबाट प्रवेश गरेका नेतालाई प्राथमिकता दिइ प्रदेश नम्बर नम्बर २ का तहमा उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादीले बुधबार मनोनयन गर्ने दिनै प्रवेश गरेका तीनजनालाई उम्मेदवार बनाएको छ ...
महानगरको महासंग्राम : वीरगन्जमा कसले मार्ला बाजी
काठमाडौं । देशकै प्रमुख आर्थिक नगरी एवं दुई नम्बर प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जको प्रमुख पद हत्याउन दलहरू लागिपरेका छन् । प्रमुख दलसहित मधेसी दल कसरी महानगरको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्नेमा ...
तेस्रो चरणको निर्वाचनमा तालमेल नगरी दलहरु एक्ला एक्लै भिड्दै
काठमाडौं। स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावमा सत्ता समर्थक दलहरुबीचको ‘महागठबन्धन’ बनाउने प्रयास विफल भएको छ । प्रमुख विपक्षी एमाले बाहेक तुलनात्मक रुपमा नजिक रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम ...